Android Wear 2.0 dia mijery ny fanavaozana ny Android Oreo | Androidsis
El mitombo hatrany ny tsenan'ny smartwatch ary ny varotra dia mitombo isan-taona. Noho izany, zava-dehibe ny fanavaozan'izy ireo ny fotoana rehetra. Izany no mitranga ankehitriny Famantaranandro mifototra amin'ny Android Wear 2.0. Hatramin'ny nanambarany ny beta iray volana lasa izay, manomboka mandray Android Oreo. Ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa dia efa zava-misy.
Android Wear 2.0 dia miorina amin'ny Android Nougat. Google izao dia manambara fa ity fanavaozana vaovao ity dia hanana Android Oreo. Toy ny mahazatra amin'ny fanavaozana, avelao izahay vaovao. Inona no fanovana entin'ny kinova vaovao an'ny rafitra miasa?
La Ny fanavaozana dia mamela antsika hanana fiasa vaovao maro izay mampanantena fa hanatsara ny fampiasana ny famantaranandro marani-tsaina Android. Fanatsarana lehibe maromaro. Izahay dia mamela anao ny lisitry ny vaovao rehetra eto ambany:
1 Inona no vaovao amin'ny Android Oreo amin'ny Android Wear
2 Modely inona no havaozinao?
Inona no vaovao amin'ny Android Oreo amin'ny Android Wear
Hidio ny efijery mikasika: Raha mandro amin'ny fampiasana famataranandro ianao dia mety hikitika ny efijery ny ranonorana. Soa ihany, mba hisorohana an'io, ny safidy hanafoanana ny efijery mikasika dia ampidirina avy amin'ny sehatra. Noho izany, ny famantaranandro dia ampiasaina amin'ny satro-boninahitra, na dia amin'ireo maodely izay misy satroboninahitra nomerika ihany aza ary mifanaraka amin'izany asa izany.
Amboary ny hamafin'ny hovitrovitra: Android Wear izao dia mamela antsika hanitsy ny hamafin'ny fihoaran'ny fampandrenesana. Afaka misafidy vibration lava na fohy kokoa isika ary koa mahery vaika na tsy dia mahery.
Fantsona fampandrenesana: Afaka mitantana fampandrenesana amin'ny sokajy samihafa atolotray anay ireo fantsona fampandrenesana. Fampisehoana efa misy ao amin'ny Android Oreo ho an'ny finday.
Mihetsiketsika ny batterie: Hahafahantsika manatsara sy mamonjy batterie amin'ny famerana ny fanatanterahana ny rindranasa any aoriana.
Tohano amin'ny fiteny vaovao fito: Ny kinova Espaniôla vaovao dia natolotra ho an'ny firenena amerikanina latina, ary koa Czech, Portigey, anglisy ho an'i Nizeria ary Holandey ho an'i Belzika.
Modely inona no havaozinao?
Amin'izao fotoana izao dia efa misy famantaranandro eny an-tsena izay fantatsika fa havaozina. Momba ny LG Watch Sport, raha ny marina dia ilay voalohany mandray ny Android Oreo beta iray volana lasa izay. Mikasika ireo modely ambiny eny an-tsena, tsy misy navoaka na nambara amin'izao fotoana izao. Toa tsy maintsy hanao an'izany isika miandry andro vitsivitsy. Mandra-pahatongan'ny fanambarana ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android Oreo dia tonga amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Android Wear 2